Kuqinise Sales yakho
Ngokwenene loo nto bokuba ababonisa zokuthuthukisa yokuthengisa. Ngeempawu yedijithali, ungakwenza oko, yaye loo nto kanye ekuqaleni. Kuyanceda ukwazi ukumelana ngakumbi ukuziphatha lomthengi lokuthenga.
Kanye TV, ushicilelo, nakunomathotholo, iimpawu ividiyo LED ubamba ingqalelo ngendlela ezibukhali kwaye icacile. Le ibonisa kwizinga eliphezulu kunye imibala eqaqambileyo bayakwazi ukuquka izinto ezifana iindaba uyayondla aze video online ivumela abathengisi ukuphumela ingxolo uze uqhagamshele nabathengi.
Imiyalezo angena kubethwa ngoyaba
Ngeempawu yedijithali, unako ukuphucula ukuthengisa zakho ngokuthatha ulawulo ngakumbi yokuziphatha ukuthenga abathengi bakho, ngenxa yolwazi, imiyalezo, uze ubambe ingqalelo yabo ngaphandle kokusilela. Ngoncedo imibala, iividiyo, iigrafiki crazy, iimposiso, imiqondiso yedijithali beka umyalezo wakho kwi-customers zakho 'ingqondo-izithuba.
uqhagamshelwano Web nokufikeleleka ezifanelekileyo
imiqondiso zedijithali ezinxulumene ne-intanethi yaye kulawulwa kwingingqi okanye kude. Ungaquka Twitter feeds, imeko kwemozulu, ividiyo, iindaba feeds, nasemva blog kwi kwidispleyi. Umzekelo, xa umboniso iLED yi iimfesi impahla showroom, ngoko amanye amacebiso ifashoni okanye iividiyo impahla ezithandwayo kungaboniswa ukonga ixesha yoMthengi.
izinqumo Impembelelo ukuthenga
Ngokubhekiselele ekufikeleleni abaphulaphuli bakho ekujoliswe, Ngokusebenza kunye nabathengi ngempumelelo yaye ngokuvelisa ingeniso engakumbi kubalulekile. Kwaye, ngokuba koko, ukubonisa lwedijithali isisombululo egqibeleleyo ukuphembelela ukuthenga izigqibo.
Ukukhuphisana kule xesha namhlanje izacholo, amashishini kufuneka ukuqinisekisa ukuba amava abaxhasi babo kwivenkile yakho neevenkile kufuneka ibe kwaku- obukholekayo tsakisaka. Ngoncedo elicwangcisiweyo ufakelo LED Video seeMPawu, umntu ukuhlangabezana neemfuno zabo ishishini '.